जयबहादुर घिमिरे – मझेरी डट कम
कति राम्रो पेशा तिम्रो टाई कालो सुट
गहिरिएर हेर्यो भने रहेछ अद्भूत
निर्दोष, निर्धो, ब्रह्मज्ञानी भन्ने जानीजानी
कठघरामा स्वागत गर्छौ विपक्ष नै ठानी ।
गैराघरे पण्डितको छोरा हिरामणि पौडेलको स्मरण शक्ति बेजोडको थियो । बालक काल मै उसलाई हिन्दू धर्म शास्त्रको राम्रो छाप बसेको थियो । उसलाई जगन्नाथ गुरागाईको लोकप्रिय खण्ड काव्य गुणरत्नमाला कण्ठस्थ जस्तै थियो ।
सक्यो वारयेतं जलेन हुतभुक छत्रेन सूर्यातपो
नागेन्द्रो निशिताङकुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ ।
व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगगैर्विषं
सर्वस्यौषधिमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नात्यौषध म ।
आज पुरा १९ महिना बितेछ, मैले लेख्न पढ्न छाडेको । यस अवधिभरिमा “हाय! हाय !लोकतान्त्रिक न्याय” शीर्षकको एउटा मात्र वास्तविक घटनामा आधारित कथा लेखी अन्तमा अलिकति काल्पनिक कुरा जोडे । २०७१ साल असार २४ गते साँझ ७:३० बजे जग्गा जमिनको साध सीमानाको निहुँमा छिमेकीसँग मेरो छोरा विष्णुको नराम्रोसँग झडप भयो । छोराले गुहार ज्यान बचाउँ भनेपछि छुट्याउन जादाँ हामी बुबा आमा समेत काटिएर सक्त घाइते भयौँ ।
अम्बरबहादुर खड्का पेशाले शिक्षक हुन् तापनि उनले उनेको पुख्र्यौली कृषि व्यवसाय पनि छोडेका छैनन् । ४ जनाको परिवार आफू दई दम्पत्ति २ भाइ १६ र १८ वर्षका छोराहरू छन् । कान्छो छोरा ९मा जेठो १२ कक्षामा अध्ययन गर्दैछन् । श्रीमती सामान्य साक्षर छिन्; प्राथमिक स्तरको शिक्षा पूरा गरेकी छिन् तर कृषि कामको लागि भने बघिनी बराबर छिन् भन्छन् गाउँलेहरू ।
भरखरै वरिष्ठ साहित्यकार अनिल पौडेलको अतितको “विस्कुन” नामको आत्मसंस्मरण बजारमा आएको छ । जसलाई पाठकहरूले खुब रुचिकासाथ पढिरहेका छन् । त्यहाँ “बिहेको कथा” शिर्षकको संस्मरण छ । उनको विवाहको सन्दर्भको जसमा उनले नढाँटी नलजाई आफ्नो आर्थिक दुदर्शा उल्लेख गरेका हुन् । जसलाई नजिकबाट त्यो कुरा नबुझ्नेले अतिशयोक्ति पनि मान्न सक्छन् । तर उनको विवाहमा जन्ती गएका मेरा आफन्तहरूको कुरा अनुसार सबै सत्य हुन् मेरो विचारमा ।
एक दिन भुल्याएस सम्झें, अब एउटा फ्ल्याट भाडामा लिने र तास खेलाउने दाउ पर्दा कहिले काँहि जुवा पनि खेलाउने । तर मन मानेन । एउटा पबित्र पेशा गरेको गुरु । कसरी त्यो व्यावसाय अपनाउने ? फेरि अर्को मनले भन्यो – मेरो पेशा मात्र त पबित्र थियो ।
दुर्गम गाउको प्राथमिक विद्यालयमा पढाउछु । मेरो विद्यालय र गाउँघरको नाजुक अवस्था तथा आफ्नो दायित्व दाज्छु मन बुझ्दैन । अनि मन वह लगाउन राम्रा राम्रा लेखकको राम्रा र आदर्श पुस्तकहरू, जस्तै रविन्द्र मिश्रको ‘खान पुगोस दिन पुगोस’, स्व. जगदीश घिमिरेको ‘अन्तरमनको यात्रा’, कर्ण शाक्यको ‘सोच’, तथा जोन उडको ‘माइक्रोसफ्टदेखि वाहुनडाँडासम्म’ पढ्छु ।
साँचो कुरा लेखौँ भने ज्यान, जागिरको आश छ
नलेखौँ त छातीभरि पीडाहरूको ह्रास छ
ज्यान, जागीर असुरक्षित हुने ठाउँमा बास छ
आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्नोस् भन्ने मेरो आश छ
हजुरले मलाई अह्राउनु भएको थियो, “नेपालीसाहित्यमा हिमाली क्षेत्र ओझेलमा छ । त्यसलाई पारिलो बनाऊ ।
कृषि पेशा सबैभन्दा पुन्य भनी कहलिन
त्यही पनि निधारे हुँदा सधै हिलो सुकाइने
त्यही पीडाले सहर पसी ब्यापार थालेको थिएँ
अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धामा थलिनसम्म थलिएँ
प्रतिष्ठित पेशा ठानी लेख्न थालेँ शुरु बुरु
पारिश्रमिक नलिएमा छापी दिन्थे खुरुखुरु
सास्ती र मोजमस्ती
कर्तव्य निष्ठ हुँदा हुदैँ
फेरि किन सुरु भयो
यो दुःख सास्ती ?
मात्र लेखक कहलिन
कसले पढ्छ अब ?
लेखेको बरु एक हरफ पढिन्छ
लेखक हुन पढ्न पर्दैन
लेखक हुन गर्नु पर्छ
के राम्रो ?
माओवादी बन्नु राम्रो
तिमीलाई एक सुशिक्षित सुन्दरी ठानी
कलम बन्द, बोकौं डण्डा
अबदेखि गरौँ हामी अनिश्चतकालीन कलम बन्द
र बोकौँ हातमा गतिला गतिला घंगरुका डण्डा
पटक पटक हामीले दिएको लिखितसुझाव
नेताहरूले नमान्दा ।
तातेको फलामलाई कुट्््न किन ढिला गर्ने ?